Zvita 2019 - RayHaber | raillynews
Mwedzi: December 2019
Mari yeBursa Yekufambisa Yevanhu Inosimudza! New Tariff Inoshanda Januari 1
Bursa Mari Yezvekufambisa Mari! Vadzidzi havana kubvisirwa mutemo mutsva pamitengo yekufambisa yeruzhinji muBursa musi wa 1 Ndira 2020. Saka, makore 4 apfuura, 1,5 TL yakanyorera kune boarding yemudzidzi [More ...]
Istanbul Metro Inotakurwa Vanoda Kusvikira Mamirioni mazana manomwe Vaipfuura
Istanbul Metro Inotakurwa Vanoda Kusvikira Mamirioni mazana manomwe Vaipfuura; Iyo metro, iyo yaifarirwa kufambisa nekukurumidza uye yakagadzikana, yakashandira vagari veIstanbul nekumhanya kwakazara muna 700 zvakare. Vanenge vangangosvika mazana manomwe emamiriyoni emwaka mukati megore [More ...]
TÜDEMSAŞ GCC Musangano Wakagadziriswa
Iyo Administrative Board Musangano weInstitution yakaitirwa yeVashandi veHurumende paTÜDEMSAŞ General Directorate uye zvido zvikagadziriswa. Pamusangano wakaitwa nemusi weChina, Zvita 2019, 26, zvinodiwa uye mazano evashandi veTÜDEMSAŞ, Memur-Sen [More ...]
New Year Mharidzo kubva kuTurhan, Gurukota rezvekutakura Nzvimbo
Ari kupemberera gore idzva renyika, nyika yedu yakakosheswa uye vanhu vese. Ndinoshuva gore 2020 rive gore umo tariro dzakawedzera, rugare rwakabata pasi rese, uye manzwiro ehushamwari, hukama pamwe nekubatana akawana simba. New Year, [More ...]
Nheyo dzematanho maviri akapatsanuka echitima, inozoiswa muKayseri muna 2020
Meya weKayseri Metropolitan Municipality Memduh Büyükkılıç, 2020 ichave imwe yemakore kuratidza ramangwana reKayseri, akadaro. Mutungamiri Büyükkılıç, Kayseri, kwete chete kuitira ramangwana razvino rakakosha zvakanyanya mumabasa [More ...]
SeTCDD General Directorate yeTravelation, isu takasiya rimwe gore ratinopa up-to-date uye hwepamusoro basa rekushandira vagari vedu vanoremekedzwa. Chinonyanya kukosha venyika ano zvikurukuru kuchiteshi zvekutepfenyura iyo vakanyorwa zvinokosha kubudirira muTurkey [More ...]
Marmaray achashanda kusvikira New Year's Eve Nguva
Kuti tikwanise kusangana nekuwedzera kuri kudiwa kwevapfuuri nekuda kweNew Year's Eve, Marmaray Trains achangoshanda kusvika 02.00 paGore Nyowani. Zvitima zveMarmaray zvichafambiswa pakati peZeytinburnu-Söğütlüçeşme zviteshi musi waDecember 31, pamaminetsi gumi nemashanu. [More ...]
Sledge Kunakidzwa muOrdu Highlands
Meya weOrdu Metropolitan Municipality Mehmet Hilmi Güler's Ordu Mauto kwete mwedzi gumi nemaviri asi mwedzi gumi nemaviri ”motto iri kuzadzikiswa. Kuti uwane iyo nguva yechando muOrdu, Metropolitan Municipality, Akkuş [More ...]
ANTRAY uye City Mabhazi akasununguka kusvika New Year Evha
Chokufambisa chepachena paEvha yeGore Idzva. Chipo chegore Idzva kubva kuna Antalya Meya Muhittin Böcek kune vagari veAntalya. Mahwendefa epamabhazi epamutemo weMetropolitan Municipality uye ANTRAY achapa vagari vemahofisi basa mahara kusvika New Year Eve. [More ...]
Akçaray Expeditions Ichaenderera Kusvika 02.00:XNUMX Tonight
Zvokufambisa, iyo inotsigira Kocaeli Metropolitan Municipality, yakazivisa kuti Akçaray ichashanda kusvika 02.00 paGore Nyowani. Akçaray'ın zuva rekutanga kwegore musi waNdira 1, 2020 pa02.00:30 kusvika makumi matatu maminitsi makumi matatu [More ...]
Iri 2019 raive iro Mwaka Wekudyara İzmir
İzmir Metropolitan Municipality yakaisa 2019 bhiriyoni TL muna 3,3. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana pamashandisirwo ezvekudyara muMetropolitan huwandu hwekudyara akawedzera nezvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana kana zvichienzaniswa gore rakapfuura. Izmir Metropolitan Municipality, [More ...]